Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: taiza hatramin’izay ela izay ? | NewsMada
Efa latsaka anaty lalina, tototry ny fahasahiranana ny mponina vao tonga saina mikasika ny tsy firindran’ny toe-draharaha noho ny fitantanana ve ny fitondrana ? Efa ela anefa izay nidradradradran’ny mponina izay sady tsy manana olona itarainana no tsy misy andry afaka iankinana. Ny sasany mody marenina, ny hafa mody mahita toy ny hoe zava-baovao ny fitombon’ny hetraketraky ny tsy fandriampahalemana sy ny onjan’ny fisondrotry ny vidim-piainana. Ao koa ny ady amin’ny kolikoly, fa resaka hafa iny. Antony manokana no itadiavan’ny governemanta isarihana ny fitarihana ny ady amin’io fanetriben’
ny firenena io. Be tabataba no be lazao tato ho ato ny Bianco ka te hitraka sao difotra noho izay ny governemanta. Diso toerana anefa izy ao anatin’io sehatra io. Toy ny rehetra ny mpitondra, samy arahi-maso avokoa. Ny andraikiny aza tsy efany ka ahoana moa no mbola hiamboany hiloloha anjara roa mifanipaka, sady ho mpanara-maso no arahi-maso? Ny tena adidiny no mendrika imasoana. Ny fitadiavana fandrefesana amin’ny fitomboan’
ny tsy fandriampahalemana sy amin’ny fisondrotry ny vidim-piainana. Nilatsaka iny ny kabary ary niseho ny famoretana tànan’akanjo. Andrasana ny manaraka. Ela no nahenoana ny vava sy nahitana fihetsiketsehana. Ny manaraka no andrasana sao dia sanatria ny fomba fampisehoana izany fotsiny no nohavaozina. Eto ampiandrasana ny tohiny, tsy mahadiso no mametraka fanontaniana. Fantatry ry zalahy marina ve ny tokony hataony ? Raha fantany moa ny tokony hataony sy ny fanaovana azy, inona no nandrasany hatramin’izay ? Ny tranga miseho anefa tsy azo ho lazaina akory hoe vokatry ny natao, fa ny tsy fisiam-bokatra noho ny tsy natao na farafahatsarany noho ny tsy fahaiza-manao.
Ny vahoaka no tena latsaka an-katerena. Ny ampitso tsy misy mangirana ary tsy misy fanefitra atokisana, afaka ianteherana. Tsy mana-tsafidy afa-tsy loka amin’ny fandrovitana tsihy anio sy ny sedra mety hampitafy gony rahampitso ! Mandodona ireo maika handray fandimbiasana, efa nozakaina anefa ny vita sy ny tsy vitan’izy ireo, ny maro aminy efa nanandramana fa samy tsy nahomby. Tsy miankina amin’olona anefa ny fomba ivoahana avy ao anatin’ity boribory vetaveta ihodinkodinana mahafanina ity, fa avy amin’ny fandinihana ny tsy ho diso làlana toy ny hatrizay. Tsy hahita fiovana fa hiodinkodina ampitoerana raha tsy mbola ny mpitondra no atao tsara fehy voalohany mba tsy hahafahany hanatavy tena fotsiny sy hitetika ny hiala maina nefa nandentika ny vahoaka any an-davaka no namarina ny firenena any an-kady.